Uhlaziyo lweeScholarship Archives - Iindaba zeSikolo ngoku: Iindaba zeSikolo ngoku
Isikolo soShishino eNetherlands / OKP MBA Scholarship 2021
Kufakwe kuyo Uhlaziyo lweeScholarship by Abasebenzi ngoJulayi 29, 2021
Isikolo soShishino saseNetherlands sivula iingcango zabo kwizicelo zabafundi bamanye amazwe kwiSikolo seShishini saseNetherlands / se-OKP MBA Scholarship minyaka le. Nangona kunjalo, iNkqubo ye-Orange yolwazi lwe-2021 izicelo zivaliwe ngexesha lokubhalwa kweli nqaku. Abaviwa baya kuvulwa kwakhona ngefestile ngo-2022. Inkqubo ye-MBA yaMazwe ngaMazwe, isifundo sokufunda-sokuhamba nge-MBA Solution […]
I-20 yezoLimo lweScholarship Portal Application Portal 2021 yaBafundi beHlabathi
Ukufundiswa kwabafundi abaphumelele kwizifundo zezolimo kwahluka njengentsimi uqobo kwaye kugubungela yonke into ukusuka ekulimeni nasekufuyeni ukuya kwi-agronomy, isityalo kunye nesayensi yomhlaba, isityalo se-pathology njl. bhalisa kwaye uqalise. 20. Ubambiswano loPhando lwe-IITA […]
Kufakwe kuyo Uhlaziyo lweeScholarship by Abasebenzi ngoJulayi 28, 2021
Ngaba ujonge uqeqesho lukaGoogle ukuze ufake isicelo? Emva koko uhlala kwindawo efanelekileyo, funda. UGoogle yenye yeenkampani ezihlala ziphakamisa uluhlu lweyona ndawo intle yokusebenzela kwaye ibekwe kwindawo yokuqala izihlandlo ezithandathu kuluhlu lweenkampani eziphambili zeFortune 100. Nye […]
Kufakwe kuyo Uhlaziyo lweeScholarship, Funda kwelinye ilizwe by Abasebenzi ngoJulayi 28, 2021
Ukufundisisa akukaze kubonakale kulula xa ukhetha iSweden. ISweden lelinye lamazwe ambalwa eYurophu apho unokufunda khona simahla. Funda ukuze ufumane ukuba zeziphi iinkqubo eziphambili zokufunda phesheya eSweden zabafundi bamanye amazwe ezifumaneka ngo-2021. Urhulumente waseSweden emva koko upasile umthetho ohlawulisa ngezifundo […]
Uqeqesho lukaMicrosoft 4Afrika oluHlawulwayo lwango-2021
Kufakwe kuyo Uhlaziyo lweeScholarship by Abasebenzi ngoJulayi 27, 2021	• 0 Comments
Izicelo zamkelwe njengangoku kubafundi abaselula baseAfrika kwiiNkqubo zeMicrosoft 4Afrika eziHlawulwayo. Abantu abanomdla kufuneka bangenise izicelo zabo ngaphambi komhla obekiweyo. Inkqubo ye-Interns4Afrika ibonelela abantu abatsha abanetalente ngamava awodwa ngombutho wetekhnoloji eguqukayo kunye ne-agile kwilizwekazi lase-Afrika. Uza kusebenza iinyanga ezi-6 nge […]
I-Internship yaseKorea yaBafundi beZizwe ngeZizwe ngo-2021
Kufakwe kuyo amanqaku, Education, Uhlaziyo lweeScholarship, Funda kwelinye ilizwe by Abasebenzi ngoJulayi 27, 2021
Ukuhamba nge-internship eKorea nge-AIP, unethuba lokuphonononga eli lizwe kuqala kwaye unamava kuyo yonke into elinayo, ngeenkampani zaseKorea ngokuqhubekekayo ziphuhlisa ubukho bazo bamazwe aphesheya, amathuba okusebenza ayanda ngesantya esikhawulezayo, wenza njani uqeqesho eKorea izandi, eyona ides ilungileyo. Emva koko si […]
I-10 ehlawulwa ngaphakathi eIreland yaBafundi beHlabathi 2021 uHlaziyo
Kufakwe kuyo amanqaku, Uhlaziyo lweeScholarship, Funda kwelinye ilizwe by Abasebenzi ngoJulayi 27, 2021
Olunye uqeqesho oludumileyo eIreland lukwicandelo lemfundo, impilo yoluntu, ukuthengisa kunye nentengiso. Izifundo ezihlawulwa eIreland ziluncedo kakhulu ekuncedeni abafundi ukuba bahlale kwizifundo zabo ngokubonelela abathathi-nxaxheba abaninzi ngekhredithi yasekholejini xa begqibile ngelixa begubungela iimfuno zabo zezemali kwinkqubo yabo yonke. Ungenelelo phesheya lolugqibeleleyo […]
I-NNPC / Iyonke i-Scholarship Uluhlu olupheleleyo lwabaviwa abaphumeleleyo 2021/2022
Kufakwe kuyo Uhlaziyo lweeScholarship by Abasebenzi bokuhlela ngoJulayi 26, 2021	• 0 Comments
I-NNPC / Iyonke i-Scholarship Uluhlu olupheleleyo lwabaviwa abaphumeleleyo kuvavanyo lokukhetha i-2021/2022 ayikabikho, siya kuba ngabokuqala ukukwazisa ukuba kunini. Bona ezinye iinkcukacha ezingezantsi. Iyonke i-Upstream Nigeria Limited (i-TUPNI), ngokuhambelana nokuhlonitshwa kwayo kwezeNtlalontle phantsi kwe-OML130 Asset, iyavuya ukunikezela nge […]
Izizathu ezili-10 zokuba kutheni abantu abaninzi baseNigeria bekhetha iLondon eParis ngo-2021
Amazwe angama-44 asimahla kwiVisa-yasimahla kuwo onke amaNigeriya 2021
Iindaba zeJamb zokuKhupha iiNdaba- Jonga iZiphumo zeNkcukacha-manani ezingama-2021